Download DatPyar APK latest version 1.1 for android devices
HomeAppsMusic & audioDatPyar
DatPyar is free to download Myanmar audio stories.
I was introduced by WhoWhatWant developer, DatPyar isaMusic & audio app on the Android platform. The current version is 1.1 released on April 05, 2020. This app has over 1.4 thousand downloads .you can check the details below.
မင်္ဂလာပါ ဓါတ်ပြား (DatPyar) မှကြိုဆိုပါတယ်။
DatPyar မှာ မြန်မာအသံဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို အခမဲ့ နားစဉ်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးအစားတွေကတော့ တရားတော်များ၊ ပရိတ်၊ ပုံပြင်၊ ဟာသ၊ အချစ်၊ စွန့်စွန့်စားစား ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ပရလောက ဇာတ်လမ်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အသစ်တွေလည်းအမြဲတမ်းထည့်သွင်းပေးသွားဦးမှာပါ။ အခုပဲ Download လုပ်ပြီး အခမဲ့ နားဆင်လိုက်ပါ။
Download လုပ္ၿပီးနားေထာင္လို႔မရတာကိုျပင္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ အသံဖိုင္ကို Offline နားေထာင္လို႔ရပါၿပီ။ နားေထာင္ရင္း ရပ္မသြားေတာ့ပါဘူး။
Sgaw Karen Bible (CL)